Kooxaha Manchester United,West Ham,Swansea,Liverpool iyo Aston Villa oo Guulo Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford 2-1 uga badisay kooxda Stoke City
Kooxda Manchester United ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 21-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Marouane Fellaini.
Ciyaaryahan Steven Nzonzi ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Stoke City,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Juan Mata ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Manchester United.
Kooxda Manchester United kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta afaraad,waxana ay leedahay 25-dhibcood,halka Stoke ay horyaalka uga jirto kaalinta 13-,iyadoo leh 15-dhibcood.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa waxaa garoonkeeda Hawthorns 1-2 uga badiyay kooxda West Ham United.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 10-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Craig Dawson.
Ciyaaryahan Kevin Nolan ayaa daqiiqadii 35-aad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda West Ham United.
Ciyaaryahan James Tomkins ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta gool labaad u dhaliyay kooxda West Ham United,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda West Ham United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 24-dhibcood,halka kooxda West Brom ay horyaalka uga jirto kaalinta 16-aad,iyadoo leh 13-dhibcood.
Kooxda Swansea City ayaa garoonkeeda Liberty Stadium 2-0 uga badisay kooxda Queens Park Rangers.
Ciyaaryahan Sung-Yueng Ki ayaa daqiiqadii 78-aad ee ciyaarta goolka koowaad u dhaliyay kooxda Swansea City.
Ciyaaryahan Wayne Routledge ayaa daqiiqadii 83-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Swansea City.
Kooxda Swansea City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta lixaad,waxana ay leedahay 22-dhibcood,halka kooxda Queens Park Rangers ay mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseya.
Kooxda Burnley ayaa garoonkeeda Turf Moor barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Newcastle United.
Kooxda Burnley ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 34-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan George Boyd,sidasi ayana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Papiss Cisse ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Newcastle United.
Kooxda Newcastle United ayaa horyaalka ingiriiska uga jirto kalainta tobanaad,waxana ay leedahay 20-dhibcood,halka Burnley ay markii u horeysay ilaa markii uu horyaalka bilowday ay ka soo baxday sedaxda kooxood ee ugu hooseeya horyaalka horyaalka,waxana ay soo gashay 17-aad,iyadoo leh 12-dhibcood.
Kooxda Leicester City ayaa waxaa garoonkeeda King Power Stadium 1-3 uga badiyay kooxda Liverpool.
Kooxda Leicester City ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 22-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Jose Leonardo Ulloa.
Kooxda Liverpool ayaa gool barbardhac ah heshay daqiiqadii 27-aad ee ciyaarta,waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Adam Lallana,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Steven Gerrard ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta gool labaad u dhaliyay kooxda Liverpool.
Ciyaaryahan Wes Morgan ayaa daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Leicester City.
Ciyaaryahan Jordan Henderson ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Liverpool.
Kooxda Liverpool ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta sagaalaad,waxana ay leedahay 20-dhibcood,halka kooxda Leicester City ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Crystal Palace ayaa garoonkeeda waxaa Selhurst Park 0-1 uga badiyay kooxda Aston Villa.
Kooxda Aston Villa ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 32-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Christian Benteke,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Labada kooxood ayaana wax gool ah iska dhalin qeybtii danbe ee ciyaarta.
Kooxda Aston Villa ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta 12-aad,iyadoo leh 16-dhibcood,halka kooxda Crystal Palace ay horyaalka uga jirto kaalinta 15-aad,iyadoo leh 13-dhibcood.